शुक्रबारदेखि नयाँ नियमका साथ आइपिएलको १४ औं संस्करण | Ratopati
शुक्रबारदेखि नयाँ नियमका साथ आइपिएलको १४ औं संस्करण
खेलमा देखिनेछ यस्तो परिवर्तन
नयाँ दिल्ली । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को १४ औं संस्करण शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । क्रिकेटको सबैभन्दा रोमाञ्चक फर्म्याट मानिने ‘टी–२०’ अन्तर्गत भारतका विभिन्न फ्रेन्चाइजी टिमबीच हुने यो प्रतियोगिता यस पटक भने विगतको भन्दा केही पृथक देखिनेछ ।
आइपिएलका लागि भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ले केही नयाँ नियम बनाएको छ भने केही नियमलाई परिमार्जन गरेको छ । जसले गर्दा आइपिएलको यो सिजनमा दर्शकले भरपूर मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने अपेक्षा लिइएको आयोजक कमिटीको भनाइ छ ।
आइपिएलको पहिलो म्याच शुक्रबार साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर बेंग्लोरबीच हुनेछ ।
मैदानमा रहेको अम्पायर कुनै निर्णयमा पुग्नका लागि विश्वस्त नभएको अवस्थामा तेस्रो अम्पायरलाई ‘रेफर’ गर्ने क्रममा मैदानबाट ‘सफ्ट सिग्नल’ का रुपमा आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने नियम छ । तर ‘सफ्ट सिग्नल’ लाई उल्टाउनका लागि पर्याप्त प्रमाण आवश्यक पर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा तेस्रो अम्पायरले समेत सही निर्णय दिन नसकेको अवस्था थियो । हालै भारत र इंग्ल्याण्डबीचको खेलमा ‘सफ्ट सिग्नल’ का बारेमा विवादसमेत भएको थियो । तर, आइपिएलको १४ औं संस्करणमा अम्पायरले मैदानबाट ‘सफ्ट सिग्नल’ दिन पाउने छैनन् ।
कुनै कारणबस बीचमा केही समय म्याच अवरुद्ध भएमा अवरुद्ध भएको समय पूर्ति गर्नका लागि प्रतिओभर ४ मिनेट १५ सेकेन्ड समय थपिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘आहा रारा गोल्डकप’को उपाधि संकटालाई
एल क्लासिको : बार्सालाई हराउँदै रियल शीर्ष स्थानमा
सिटीलाई लिड्सको झट्का, लिभरपुल विजयी
चेन्नईमाथि दिल्लीको लगातार तेस्रो जीत
तपाईँ कुवेतमा हुनुहुन्छ ? २०७८ मा कहिले कहिले हुन्छ दूतावास बन्द ?
सरकार व्यवसायी मैत्री भएन : शेर्पा
पर्यटक कुरिरहेको ठमेल, नयाँ वर्षको छैन रौनक